iPhone 14 Pro ၏အစီအစဥ်များက၎င်းသည်ပိုမိုထူ | iPhone သတင်း
iPhone 14 Pro ၏ အသေးစိတ်ပုံစံများက ၎င်းသည် ပိုထူကြောင်းပြသထားသည်။
Tony Cortes | | iPhone ကို 14
အစီအစဥ်များကို ပြင်ပတိုင်းတာမှုများနှင့်အတူ ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ 14 iPhone ကို Pro ကို. ဤအစီအစဥ်များသာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ ယခင်ထွက်ရှိထားသော iPhone ထက် အနည်းငယ်ပိုထူကာ ကင်မရာများ၏ အချွန်အတက်များကို ပိုမိုသိသာထင်ရှားစွာ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နောက်လာမည့် iPhone 14 Pro တွင် case တစ်ခုမတပ်ဆင်ပါက၊ ၎င်းသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် အနားယူနေချိန်တွင် စားပွဲမျက်နှာပြင်ထက် ပိုထိုင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ကျတာပေါ့…။
သူတို့က ဒီနေ့ပဲ ထုတ်ဝေတယ်။ တွစ်တာ iPhone 14 Pro နှင့် iPhone 14 Pro Max တို့၏ အသေးစိတ်ပုံသဏ္ဍာန်များသည် Apple ၏နောက်ထပ် high-end iPhone များတွင် ပိုမိုထင်ရှားသော ကင်မရာမီးမောင်းထိုးပြမှုများနှင့် ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုထူ.
ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ iPhone 14 Pro Max သည် အကျယ် 77,58 မီလီမီတာရှိပြီး 13 မီလီမီတာရှိသည့် iPhone 78,1 Pro Max ထက် အနည်းငယ်ကျဉ်းမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ iPhone 14 Pro Max သည် အမြင့် 13 မီလီမီတာနှင့် 160,7 မီလီမီတာ ရှိသည့် iPhone 160,8 Pro Max တို့နှင့် နီးပါးတူညီမည်ဖြစ်သည်။
အထူအနေဖြင့် iPhone 14 Pro Max သည် 7,85mm ရှိပြီး 7,65mm သာရှိသော လက်ရှိ high-end iPhone ထက် အနည်းငယ် ပိုထူမည်ဖြစ်သည်။ iPhone 13 Pro နှင့် iPhone 13 Pro Max တို့နှင့်အတူ Apple သည် iPhone 12 Pro ထက် ကျောဘက်ကင်မရာအထိုင်၏ အရွယ်အစားကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ 2022 တွင် Apple သည် အလားတူလမ်းကြောင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရှာဖွေနေပါသည်။ ကင်မရာများ၏ protrusion ၏အထူကိုပိုမိုတိုးမြှင့်.
ဒါက iPhone 14 Pro Max ဖြစ်လာမယ်လို့ Jon Prosser အိပ်မက်မက်တယ်။
ကင်မရာတွေရဲ့ ပေါ်လွင်မှုက ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။
iPhone 13 Pro Max ရှိ ကင်မရာအထိုင်သည် အမြင့် 3,60 မီလီမီတာသာရှိပြီး ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအတွက် Apple မှ ဖန်တီးထားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို အခြေခံ၍ တိုင်းတာသည်။ ယနေ့မျှဝေထားသော iPhone 14 Pro Max ၏ ကိန်းဂဏန်းများကို အခြေခံ၍ 2022 high-end iPhone တွင် ကင်မရာအဖုအထစ်များ ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ 4,17 မီလီမီတာ အထူ iPhone ၏နောက်ကျောရှိ ကင်မရာအထိုင်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုစီတွင် ခန့်မှန်းခြေ 5% တိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအကျယ် 35,01mm မှ 36,73mm နှင့် အမြင့် 36,24mm မှ 38,21mm သို့ .XNUMXmm
သေးငယ်တဲ့ iPhone 14 Pro ရဲ့ Schematics ကိုလည်း ယနေ့ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ဤအသေးစိတ်ပုံစံများကိုအခြေခံ၍ iPhone 14 Pro သည် လက်ရှိဖုန်းအတွက် 13mm နှင့် 71,45mm အကျယ်ရှိ iPhone 71,5 Pro နှင့်နီးပါးတူညီပါသည်။ iPhone 14 Pro သည် အမြင့် 13 မီလီမီတာနှင့် တိုင်းတာသည့် iPhone 147,46 Pro နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အခြေခံအားဖြင့် မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ 147,5mm iPhone 14 Pro Max ကဲ့သို့ပင်၊ iPhone 14 Pro တွင်လည်းaပါရှိသည်။ ပိုထူသောကင်မရာမီးမောင်းထိုးပြလက်ရှိ iPhone 4,17 Pro တွင် 3,60 မီလီမီတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 13 မီလီမီတာ ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone ကို 14 » iPhone 14 Pro ၏ အသေးစိတ်ပုံစံများက ၎င်းသည် ပိုထူကြောင်းပြသထားသည်။
iPhone SE ၏တတိယမျိုးဆက်သည် ပိုကြီးသောဘက်ထရီနှင့် မိုဒမ်အသစ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်။